Agromart | Agricultural Marketplace Nepal इस्कुस खेती गर्ने तरिका – Agromart
इस्कुस खेती गर्ने तरिका
Q 1. इस्कुस (Squash Mirliton)को लागि कस्तो किसिमको हावापानी चाहिन्छ?
इस्कुस समुद्र सतहबाट ३०० मिटर देखि २००० मिटर सम्मको उचाईमा यसको उत्पादन राम्रो हुन्छ। यसको लागि सापेक्षिक आर्द्रता ८० देखि ८५ प्रतिशत राम्रो मानिन्छ।
Q 2. इस्कुसको लागि वार्षिक वर्षा कस्तो चाहिन्छ?
यसको लागि वार्षिक वर्षा १५०० देखि २००० मि.लि. चाहिन्छ। कूल वार्षिक वर्षा भन्दा वितरणले बालीको सफलतामा भूमिका खेलेको हुन्छ।
Q 3. इस्कुसको खेती कति तापक्रम सम्ममा राम्रो हुन्छ?
इस्कुसका लागि २० देखि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडकोन्यानो तापक्रमको अवस्था निकै राम्रो मानिन्छ। यसले तुषारो र माटोमा पानी जमेको अवस्था सहन सक्दैन। बसन्तको आगमनसँगै तापक्रम बढेपछि यसका मुन्टाहरु पलाउन थाल्दछन्।
Q 4. यसलाई कस्तो किसिमको माटो उपयुक्त हुन्छ ?
निकासको राम्रो व्यवस्था र पि.एच. मान ५.५ देखि ६.५ भएको मलिलो हल्का बलौटे देखि दुमट माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। अम्लिय माटोमा बाली राम्रो हुँदैन। माटोको पि.एच. मान ५.५ भन्दा कम भएमा प्रति रोपनी १० देखि १५ के.जी. कृषि चुन जमिनको अन्तिम तयारी गर्दानै माटोमा मिसाउनु पर्दछ।
Q 5. नेपालमा कस्ता प्रकारका इस्कुसहरु पाइन्छन्?
नेपालमाउपलब्ध इस्कुसकाप्रकारहरु मध्ये हल्का हरिया रङ्ग भएका, काँडा नभएका वा कम भएका, कुलेसा नभएका वा हल्का गहिरा भएका, रेशा नभएका वा कम भएका आदि स्थानिय जातहरु पाईन्छन्।
Q 6. इस्कुस बाली कहिले लगाइन्छ?
इस्कुस बाली पहाडमा कार्तिक-मंसिरमा लगाएमा फाल्गुण देखि आषाढसम्म इस्कुसकाहरिया मुण्टा टिप्न सकिन्छ। त्यसपछि मंसिरसम्म फलबाली लिन सकिन्छ र पछि तरुल खन्न सकिन्छ।
Q 7. इस्कुसरोप्ने जग्गाको तयारी कसरी गरिन्छ ?
इस्कुस ड्याङ्ग र खाड्ल दुबै तरिकाबाट लगाउन सकिन्छ। ड्याङ्ग बनाउँदा हार देखि हारको बीचकोदुरी २, ३ वा ४ मिटरको अन्तरमा एक मिटर चौडा र जमिन अनुसार लम्बाईको ड्याङ्ग बनाईन्छ।
Q 8. इस्कुसलाई प्रति खाड्लमा कति मलखाद राख्नु पर्ला?
प्रत्येक १ वर्गमिटर ड्याङ्गमा १० के.जी. गोबरमल, २० ग्राम डि.ए.पी., ३०ग्रामयूरिया र ३०ग्राम पोटास मल राम्रोसँग माटोमा मिलाएर खाड्ल पुर्नु पर्दछ।
Q 9. इस्कुस रोप्नका लागि कति गहिरो खाड्ल खन्नु पर्ला?
इस्कुस रोप्नु भन्दा अगाडी ४५ घन सेन्टिमिटरको खाड्ल खन्नु पर्दछ किनकी इस्कुस रोप्ने ठाउँमा ढुङ्गा, कडा चट्टान पर्न सक्तछ। यदि खाड्ल खन्दा त्यस्तो समस्या आईपरेमा खाड्ल वरपर वा तल माथि सार्न सकिन्छ।
Q 10. इस्कुसमा रासायनिक मल हाल्नै पर्ने हुन्छ?
यसमा रासायनिक मल राख्नै पर्ने र नराखेमा उत्पादन नहुने अवस्था हुँदैन। रासायनिक मल नराख्दा प्राङ्गारिक मलको मात्रा भने बढाउनु पर्दछ उत्पादन सफलताका साथ लिन सकिन्छ।
Q 11. इस्कुस बाली कति दुरीमा लगाउँदा उपयुक्त होला?
यसको दुरीको निश्चित गर्न कुन उद्देश्यले बाली लगाइएको हो स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। फलबालीको निमित्त हार-हारको बीचमा ३-५ मिटर र बोट-बोटको बीचमा १-३ मिटर फरकमा लगाउनु पर्दछ।खोंच, भित्री मद्येशमा तरुल निकाल्नको लागि १-१.५ मिटर र हरियो मुन्टा खानका लागि १ मिटर दुरीमा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ।
Q 12. इस्कुसदाना / बिरुवा कसरी रोप्नु पर्दछ?
यसको खेती टुसाएको फल वा बेर्ना रोपेर गरिन्छ। यसको फल सुताएर रोप्नु पर्दछ र फलको माथिल्लो भाग पुरै माटोले छोप्नु हुँदैन।
Q 13. इस्कुसलाईगोडमेलको कतिको जरुरी हुन्छ ?
शुरु अवस्थामा झारपात नियन्त्रण गर्न र माटो खुकुलो पार्न १-२ पटक गोडमेल गरे हुन्छ। फलबालीको लागि पछिपनि झारपात हटाउने र गोडमेल गर्ने काम गर्दै गर्नु पर्दछ।
Q 14. इस्कुसमा थप मल / टपड्रेस गर्न जरुरी हुन्छ ?
लहराको तीव्र विकास भएको बेला फलबालीको लागि प्रति बोट ५० ग्रामका दरलेर तरुल एवं हरियो मुन्टाको लागि प्रति बोट २५ ग्रामका दरले यूरिया मल बिरुवा वरिपरि कुलेसो बनाई दिनुपर्दछ।
Q 15. इस्कुस बालीमा सिंचाईको कति आवश्यकता पर्दछ?
सुख्खायाममा ९-१० दिनमा सिंचाई गर्नु पर्दछ। वर्षायाममा वर्षात भइरह्यो भने सिंचाई दिई रहनु पर्दैन।
Q 16. इस्कुस बालीमा कस्तो किसिमले थाक्रा दिनु पर्ला?
फल उत्पादनका निमित्त बाँसको भाटा वा मसिनो फलामे तारको १.५-२.० मिटर अग्लो टाँड बनाई ३०/३० से.मि. को फरकमा राखेर त्यसमा लहरा लगाउनु पर्दछ। तरुल वा हरियो मुन्टाका लागि बाँसको साधारण थाँक्रो वा छापो मात्र दिए हुन्छ।
Q 17. इस्कुसलाईकाँटछाँटको पनि आवश्यकता पर्दछ?
तुषारो पर्ने पहाडी क्षेत्रमा मंसिर-पुषमा जमीनको सतह भन्दा १-१.५ मिटर माथिबाट झ्याङ्ग काटेर पूराना लहरा सबै हटाउनु पर्दछ। काँटछाँट पछि मल दिनु उपयुक्त हुन्छ।
Q 18. इस्कुसको फसल लिन कति समय कुर्नु पर्ने हुन्छ?
इस्कुस रोपेको ३-४ महिनामा फुल्न थाल्दछ र फल लागेको ३० दिनमा टिप्न तयार हुन्छ। मध्य-पहाडमा यसको फल आषाढ देखि मंसिरसम्म टिपिन्छ भने भित्री मद्येशमा कात्तिक देखि माघसम्म टिपिन्छ।
Q 19. इस्कुसको बोटबाट कतिसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ?
इस्कुसबाट विभिन्न खालको उत्पादन लिईन्छ जस्तै, फल बाली १५-६० के.जी., तरुल बाली ६-१४ के.जी. रहरियो मुन्टाबाली १.५-२.५ के.जी.प्रति रोपनी उत्पादन लिन सकिन्छ।
Q 20. के इस्कुस बालीमा पनि रोगहरु लाग्दछन्?
पात टाटेपाटे गराउने भाइरस रोगको प्रकोप बढी हुने भएकोले यसबाट बाली बचाउन इस्कुसको बहुवर्षिय खेतीको सट्टा एकवर्षिय वा दुई वर्षिय खेती तरीका अपनाउनु पर्दछ।
Q 21. इस्कुस बालीमा कीराहरुको पनि समस्या देखिन्छ?
इस्कुस बालीमा अन्य बालीहरुमा जस्तो कीराहरुले त्यत्ति सताउँदैनन् तर यदाकदा लाही र फल कुहाउने औंसाकोप्रकोप हुने हुँदा जैविक विषादि वा फेरोमेन पासोको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
Q 22. इस्कुस बाली टिपाईपछि केही सावधानी अपनाउनु पर्ला कि?
इस्कुसका हरिया मुन्टा सकेसम्म टिपेकै दिन उपयोगमा ल्याउने अन्यथा नओइलाउने तरिकाले राख्नु पर्दछ।इस्कुसको तरुललाई सात दिन साधारण तापक्रममा राख्न सकिन्छ तर बढी समय राख्नु परेमा जमीन मुनी खाड्ल खनेर वा शीत भण्डारमा ७-८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ८०-८५ प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रतामा राख्नु पर्दछ। शीत भण्डारको सुविधा नभएको ठाउँमा इस्कुसको तरुल चाना बनाई सुकाएर राखी लामो अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।